ဘဝတစ်သက်တာလုံးမှာ အမေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံပဲရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ ယုန်လေး | CeleTrend
ယုန်လေးကတော့ ဒီနေ့ အမေများနေ့လေးမှာ အမေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမှတ်တရများများစားစားမရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ယုန်လေးရဲ့မိဘတွေကတော့ သူငယ်ငယ်လေးကတည်းက ဆုံးပါးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ယုန်လေးကတော့ သူ့ရဲ့ကြီးကြီးနဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသူပါ။ သူကိုယ်တိုင်လည်း မိဘမဲ့တစ်ယောက်ဖြစ်တာမို့ သူ့လိုလူမျိုးတွေ့ရင်လည်း အမြဲကူညီလေ့ရှိသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ အမေများနေ့လေးမှာ လူတိုင်းနီးပါး မိခင်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ သူတို့အမေရဲ့အကြောင်းလေးတွေကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ မျှဝေနေတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ငယ်ငယ်လေးကတည်းက မိဘမဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ယုန်လေးကတော့ “Hàppy Mother Day တိုင်း တစ်သက်လုံး အမေနဲ့ တင်စရာ ဒီ တစ်ပုံပဲ ရှိတယ် ” ဆိုပြီး အမေနဲ့ တစ်ပုံတည်းသော အမှတ်တရပုံလေးကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ထပ်ပြီးတော့လည်း မိဘမေတ္တာထက်မနည်း ချစ်ပေးခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ကြီးကြီးပုံလေးကို ” နောက်တစ်ပုံက ကျွန်တော့်အမေအဖေ ဆုံးတော့မျက်နှာ မငယ်အောင် တန်းတူထက်ကို သာအောင်ထားပေးခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ တကယ့်ဘဝကြီး ကြီးကြီးပါ … အခုတော့ ကောင်းကင်မှာပေါ့ . ကြီးကြီး နဲ့ ဘဘ ကို အခုကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ ကားတွေ ရုံတင်တဲ့ အချိန် Gold Carpet မှာ ရှိစေချင်လိုက်တာဆိုတဲ့ အတွေးလေး တစ်ချက်တစ်ချက် ဝင်ဝင်မိတယ် .မဖြစ်နိုင် တော့ပေမယ့်လည်း ” ဆိုပြီးတော့ သူ့ကို အစွမ်းကုန်ချစ်ပေးခဲ့တဲ့ ဒုတိယမိဘတွေအကြောင်းကိုလည်း အမေများနေ့လေးမှာ မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
ယုန်လေးကတော့ လူတကာကိုကူညီတတ်တဲ့ မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ယောက်ပါ။ ငယ်စဉ်ကတည်းက မိဘတွေနဲ့မနေခဲ့ရပေမယ့် ဖြစ်လာတဲ့ဘဝကို အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ရင်း ဘဝကို လျှောက်လှမ်းနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့လိုနေ့မျိုးမှာ သူများတွေ အမေနဲ့ကြည်နူးစရာလေးတွေ မျှဝေနေချိန်တိုင်း အမေနဲ့အမှတ်တရတောင် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မရှိခဲ့တဲ့ ယုန်လေးအတွက်တော့ စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်လို့ နေမှာ အမှန်ပါပဲနော်။ပရိသတ်ကြီးထဲမှာရော ယုန်လေးနဲ့ ဘဝတူတွေရှိလား မျှဝေပေးခဲ့ပါဦးနော်။
ယုနျလေးကတော့ ဒီနေ့ အမမြေားနလေ့ေးမှာ အမနေဲ့ပတျသကျပွီး အမှတျတရမြားမြားစားစားမရှိခဲ့တဲ့အကွောငျးကို မြှဝခေဲ့ပါတယျ။ ယုနျလေးရဲ့မိဘတှကေတော့ သူငယျငယျလေးကတညျးက ဆုံးပါးသှားခဲ့ပွီဖွဈပွီး ယုနျလေးကတော့ သူ့ရဲ့ကွီးကွီးနဲ့ ကွီးပွငျးလာခဲ့ရသူပါ။ သူကိုယျတိုငျလညျး မိဘမဲ့တဈယောကျဖွဈတာမို့ သူ့လိုလူမြိုးတှရေ့ငျလညျး အမွဲကူညီလရှေိ့သူ ဖွဈပါတယျ။
ဒီနေ့ အမမြေားနလေ့ေးမှာ လူတိုငျးနီးပါး မိခငျကိုခဈြတဲ့စိတျနဲ့ သူတို့အမရေဲ့အကွောငျးလေးတှကေို လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာ မြှဝနေတောကို တှမွေ့ငျရမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ ငယျငယျလေးကတညျးက မိဘမဲ့ဖွဈခဲ့ရတဲ့ယုနျလေးကတော့ “Hàppy Mother Day တိုငျး တဈသကျလုံး အမနေဲ့ တငျစရာ ဒီ တဈပုံပဲ ရှိတယျ ” ဆိုပွီး အမနေဲ့ တဈပုံတညျးသော အမှတျတရပုံလေးကို မြှဝခေဲ့ပါတယျ။ ထပျပွီးတော့လညျး မိဘမတ်ေတာထကျမနညျး ခဈြပေးခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ကွီးကွီးပုံလေးကို ” နောကျတဈပုံက ကြှနျတေျာ့အမအေဖေ ဆုံးတော့မကျြနှာ မငယျအောငျ တနျးတူထကျကို သာအောငျထားပေးခဲ့တဲ့ ကြှနျတျောရဲ့ တကယျ့ဘဝကွီး ကွီးကွီးပါ … အခုတော့ ကောငျးကငျမှာပေါ့ . ကွီးကွီး နဲ့ ဘဘ ကို အခုကြှနျတျောရိုကျတဲ့ ကားတှေ ရုံတငျတဲ့ အခြိနျ Gold Carpet မှာ ရှိစခေငျြလိုကျတာဆိုတဲ့ အတှေးလေး တဈခကျြတဈခကျြ ဝငျဝငျမိတယျ .မဖွဈနိုငျ တော့ပမေယျ့လညျး ” ဆိုပွီးတော့ သူ့ကို အစှမျးကုနျခဈြပေးခဲ့တဲ့ ဒုတိယမိဘတှအေကွောငျးကိုလညျး အမမြေားနလေ့ေးမှာ မြှဝခေဲ့ပါတယျ။
ယုနျလေးကတော့ လူတကာကိုကူညီတတျတဲ့ မှနျမွတျတဲ့စိတျထားလေးကို ပိုငျဆိုငျထားသူတဈယောကျပါ။ ငယျစဉျကတညျးက မိဘတှနေဲ့မနခေဲ့ရပမေယျ့ ဖွဈလာတဲ့ဘဝကို အကောငျးဆုံးရငျဆိုငျကြျောဖွတျရငျး ဘဝကို လြှောကျလှမျးနသေူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ ဒီနလေို့နမြေို့းမှာ သူမြားတှေ အမနေဲ့ကွညျနူးစရာလေးတှေ မြှဝနေခြေိနျတိုငျး အမနေဲ့အမှတျတရတောငျ ကောငျးကောငျးမှနျမှနျမရှိခဲ့တဲ့ ယုနျလေးအတှကျတော့ စိတျမကောငျးစရာဖွဈလို့ နမှော အမှနျပါပဲနျော။ပရိသတျကွီးထဲမှာရော ယုနျလေးနဲ့ ဘဝတူတှရှေိလား မြှဝပေေးခဲ့ပါဦးနျော။